Wun Yan – Page 2
မင်းအဖေ ဆုံးသွားပြီ။ နင့်အဖေ သေသွားပြီဆိုတဲ့ အသံမျိုးကို အဖေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖူးသူတိုင်း ကြားခဲ့ရတဲ့ စကားလည်း ဖြစ်သလို မကြားချင်ဆုံး စကားတစ်ခွန်းလည်း ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီအချိန် အခိုက်တန့်လေးမှာ ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က ငိုချင်ပေမယ့် မျက်ရည်မထွက်ခဲ့ဘူး။ အသံထွက်ချင်ပေမယ့် ဆွံ့အသွားခဲ့တယ်။ အဲဒါက ဘဝမှာ လုံးဝ မျှော်လင့် မထားသော တွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ အံ့သြခြင်းကြောင့်ပဲ။ ခဏအကြာမှ ကမ္ဘာကြီး မီးလောင်သွားသလို ခန္ဓာကိုယ်…
လိုင်းပေါ်မှာတော့ ကျွန်တော် ပေါက်တယ်လို့ ပြောနေကြတာပေါ့ တကယ်က ကျွန်တော့် ဆိုင်က ထွက်တာပါလို့ ပြောလာတဲ့ ဦးစိုးဝင်း
ယခု သတင်းကို (Skynet UpToDateChannel ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (၁၇)ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ကျပ်တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက် အထူးဆုကြီးစနစ်မှ အမြင့်ဆုံးဆု ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို မုံရွာ အောင်ဆုထူးပိုင် ထီဆိုင်ပင်ရင်းမှထွက်ရှိ ယနေ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ (၁၇)ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ကျပ်တန်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက် ထီလက်မှတ်များကို “က”အက္ခရာမှ အစဉ်အလိုက် “ကစ”ထိ စုစုပေါင်းအက္ခရာ ၃၉လုံးရောင်းချခဲ့ရာအထူးဆုကြီးစနစ်မှအမြင့်ဆုံးဆု…
(၁၇) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန်
(၁၇) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ထီပေါက်စဉ်နဲ့လည်း ပြန်ပြီးတိုက်ကြပါ။ သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု ည ၈၅၃၀၉၅ သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆု ဖ ၇၈၇၃၅၄ သိန်း ၅၀၀၀ ဆုများ ဃ ၈၄၇၉၃၀ ဓ ၄၀၆၈၂၀ သိန်း ၂၀၀၀ ဆုများ ဍ ၂၆၆၀၈၇ မ ၈၁၈၅၄၉ ဌ ၃၂၀၀၁၈…
နာမည်က ရဲမင်းဖြိုး ကိုးတန်းဖြေပြီး ဆယ်တန်းတက်မည့် လူငယ်လေး
လူငယ်ဆိုတာ အချိန်ရှိတုန်း သင်ယူ လေ့လာနေရမယ်နော။ Share တာထက် ဒီကလေး ကို အားကျ အတုယူ လူငယ်တွေ ပိုဖတ်ဖြစ်အောင် လူပိုမြင် အောင် ပြန်ကူးတင်လိုက်ပါတယ်။ စာနဲ့ဓာတ်ပုံ credit to ရွှေတိုက်စိုး ကလေးနာမည် က ရဲမင်းဖြိုး။ အိမ်နာမည် နဲ့ အရပ် ထဲ က အများခေါ်တာက ကလားလေး ရပ်ကွက်ထဲ ရဲမင်းဖြိုးဆို သိပ်မသိ။…
ထီပေါက်ရင် ဘယ်လို ထုတ်ရမလည်း ဆိုတာ sharing လေး လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ ထီထွက်ခါနီးပြီးနော် ကံစမ်းပြီးပြီလား။ ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်းဆိုတော့ 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ပုံဆိုရပါတယ်)…
မြစ်ကြီးနား ဆေးရုံကြီးကို ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးလို့ ခေါ်ထိုက်ပါပြီ
မြစ်ကြီးနား ဆေးရုံကြီးကို ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးလို့ ခေါ်ထိုက်ပါပြီ။ ဘာလို့ဆို ပြည်သူပြည်သားတွေ အတွက် ငဲ့ညှာပေးလို့ပါ။ မနောကွင်းရှေ့မှာ ကားက ဆိုင်ကယ်ကို ဝင်တိုက်ပြီး လက်ကျိုးသွားတဲ့ လူနာကို ခွဲစိတ်ကုသပေးပြီး ချို့တဲ့တယ်၊ အလျော်လဲ မရဘူး၊ ကားယာဉ်မောင်းက ဆေးရုံတောင် မပို့ပေးဘဲ ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုလို့ ပုံမှန်ဆို တစ်သိန်းကျော် ကျသင့်မဲ့ ခွဲစိတ်စားရိတ်၊ ဆေးရုံ စားရိတ်တွေကို မယူတော့ဘဲ ရန်ပုံငွေသာ အလှူငွေ ထည့်ဝင်သွားပါလို့…
ဆိုင်ကြီးတွေ ကျော်လာလို့ အလွယ်တကူပဲ တံခွန်တိုင် အဝိုင်းကွေ့နားက အောင်သိဒ္ဓိ ဆိုတဲ့ ဆိုင်မှာ ဆီဝင်ထည့်တာ
မနေ့က မန္တလေးအိမ်က ကားယူပြီး အပြင်ထွက်တော့ ဆီထည့်ပေးခဲ့ဆိုလို့ သွားရင်းနဲ့ ဆိုင်ကြီးတွေ ကျော်လာလို့ အလွယ်တကူပဲ တံခွန်တိုင် အဝိုင်းကွေ့နားက အောင်သိဒ္ဓိ ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာ ဆီဝင်ထည့်တာ အိမ်ကမှာလိုက်တာ ခါတိုင်းဖြည့်နေကျ ၂၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ အလွန်ဆုံးပဲတဲ့။ ဆီပန့်က စဆွဲကတည်းက တသောင်းကျော်။ ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း ၃၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀ ဖြတ်ခနဲ့ပဲ။ အဲ မဟုတ်တော့ဘူး တော်မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ ၅၄၀၀၀ တဲ့…
အိမ်ဆောက်မည့် သူများအတွက် ကုန်ကျမည့် အုတ်ခဲ၊ အုတ်စီနည်း တွက်နည်း
အိမ်ဆောက်မည့် သူများအတွက် ကုန်ကျမည့် အုတ်ခဲ၊ အုတ်စီနည်း တွက်နည်း အုတ်စီရာတွင် ဘိလပ် မြေနှင့် အုတ် ကုန်ကျတာလေးတွေကို ဝါသနာပါတဲ့ စိတ်ဝင်စားသူ များအတွက် ပြန်တင်ပေးတာပါ။ ၉” လက်မ အုတ်ရိုးစီရာတွင် (၁၀×၁၀) ပတ်လည် တစ်ကျင်း စီရာတွင် အုတ်အလုံးရေ = ၁၀၄၀ ခဲ အလျား = ၂၆ ခဲ၊ အနံ =…
ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင် စီးနှင်းသူများ သိရှိစေရန် (၂၀၂၀ ဥပဒေသစ်)
ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင် စီးနှင်းသူများ သိရှိစေရန် (၂၀၂၀ ဥပဒေသစ်) ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ။ အခြားနံပါတ်တပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း. ထောင်သုံးလ။ ယာဉ်နံပါတ်ပြားမတပ်= ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း ထောင် သုံးလ။ ဝှီးတက်သက်တမ်းကုန် =…